အရောင်များနှင့်ဖောင့်များသည်စားသုံးသူအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံ» Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 25, 2018 သောကြာနေ့, မေလ 25, 2018 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားအများစုသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းအတွက်စာလုံးများနှင့်အရောင်များသည်အရေးကြီးကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်ကြသော်လည်းများစွာသောသူတို့သည်အမှန်တကယ်မည်မျှအစွမ်းထက်သည်ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုခိုင်လုံသောအချက်အလက်များအစားခမ်းနားထည်ဝါသောတောင်းဆိုမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသိပ္ပံပညာကဘာဆိုသနည်း။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များအတွက်စားသုံးသူများ၏ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုကိုသုတေသနပြုချက်မှာ
လူတစ် ဦး ၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ကန ဦး အကဲဖြတ်မှု၏ ၆၂% မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အရောင်တစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်အခြေခံသည် ဒီ Tweet!
လူတွေကရယ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တာနဲ့ဆင်တူပြီးကောင်းသော၊ ဖတ်ရလွယ်ကူသောစာစီစာရိုက်ခြင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည် ဒီ Tweet!
MDG Advertising မှအဖွဲ့သည်စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန်အရောင်နှင့်စာစီစာရိုက်မှု၏ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်လိုအပ်သည့်အဓိကအချက်များကိုရှာဖွေရန်နောက်ဆုံးသုတေသနကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင်စာစီစာရိုက်ခြင်းသုတေသနမှလေ့လာမှုများသည်အရောင်သုတေသနမှသင်ယူမှုများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဖတ်ရှုနိုင်မှုကို ဦး စားပေးလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်များရှိသည် - သို့သော်သင်၏အထူးပရိသတ်များနှင့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်နေရာချထားမှုကိုနားလည်ခြင်းမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များသည်
သူတို့ရဲ့အသစ် infographic, Design Matters: အရောင်နှင့်ရိုက်နှိပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသိထားရန်လိုအပ်သည် အမြင်အာရုံကရှင်းပြသည်:
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်infographic အရောင်အရောင်အဆင်းinfographic ဖောင့်ဖောင့်infographicmdg ကြော်ငြာစာစီစာရိုက်စာစီစာရိုက် infographic